mataa, konkon, fuula, adda, hidhii, gurra, areeda, morma,
gateettii, saggoo, qoorara, nyaara, dugda, ija, qoma, maddii, dirra — faa.
Faa jedheen jechoota 115 ennasuma barreesse. Anuu yoon sirriitti itti-yaade sanii olin lakkaawa jechaa dha. Dabalees yoon namoota biroo irraa qoraddhe hedduu, hedduun lafa kaawuu dandayaayyu.* Oromoon maqaa baasuu jaalata. Mana isaa, lafa isaa, nafa isaa, qeyee isaa, horii isaa faa sirriitti gargar-baasuun maqaalee kenneefii moggaasa. Furaa “Kuusaa Sagalee Oromoo” jedhamu, kan bara 1980 (A. L. Habashaatti) keessa Qees Dafaa Jammootiin barreeffame keessatti, barreessaan kun jecha “billaacha” jedhamau jalatti, billaachi gosa addaddaa akka qabu sagaleewwan 22 kennuun agarsiisa. Mee isaan keessaa hamma tokko duwwaa haa ilaallu:
1) jargee – laana, kasoo, garraamii, damboobaa (“innocent“)
balashee – baaqqee, balee
10) abaargittuu– raagduu, raajjuu, waa-himtuu
11) labata – dhaloota (“generation“)
Tajaajilamtoota mandhee Ayyaantuu Oromiyaa jaalatamoo fi kabajamoo, barreeffata kana kutaa isa tokkoffaa irraa wanni wayii irraa citee otoo hin baafamin waan hafeef, kunoo kanatti aanseen isiniif dhiyeessaa mee ilaalaa! Kunis jechoota 25 – nan ni kennamu jedhame keessaayyi, lakkoofsi 19 irraa hamma 25-tti irraa citeeyyu. Egaayyis mee kunoo:
19) wasiila – abbeeraa, adeera
20) halkoo – meeta/ meetii
21) totommoo – buunyaa, aboottee, dummuca
22) indootiyyaa – haboo, areeroo
23) harqoota – waanjoo, qambara/ qambarrii
24) abbuyaa – eessuma
25) waangoo – sardiidaa, jeedalloo/ jeedala
One thought on “JECHOOTA MOGGOYYAALEE KAN AFAAN OROMOO: Kutaa Lammaffaa”
Baay’e gaaridha akkanumatti itti fufaa.